अमेरिकामा गोली लागेकी नेपाली चेली बचाउन अभियान – ebaglung.com
अमेरिकामा गोली लागेकी नेपाली चेली बचाउन अभियान
२०७५ श्रावण १०, बिहीबार ०९:५८	Top News, अन्य समाचार
प्रेम सुनार, गुल्मी २०७५ साउन १० । गत सोमवार अमेरिकामा अज्ञात लुटेराव्दारा अन्धाधुन्दा गोली हानेर गम्भीर घाईते भएकी नेपाली चेलीलाई बचाउन सामाजिक सञ्जाल मार्फत थुप्रै नेपालीहरुले अभियान छेडेका छन । अमेरिकाको ओक्लोहमास्थित एक स्टोरमा लुटेराले अन्धाधुन्ध गोली चलाउँदा नेपाली चेली रचना श्रेष्ठको शरीरमा आठवटा गोली लागेको थियो ।
गत सोमबार स्थानीय समयानुसार मध्यान्ह सवा १२ बजे रचनालाई बड्डीज ह्यान्डी मार्ट नामक स्टोरमा एक लुटेराले गोली हानेका हुन् । उनको गाला, पिठ्युँ, पाखुरा, कम्मर, पेट र मुटुको तल्लो भागमा आठवटा गोली लागेको र उनको अवस्था अत्यन्त चिन्ताजनक रहेको उनका श्रीमान् कपिल श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् ।
आठवटा गोलीमध्ये पाँचवटा गोली निकालिएको कपिलले जानकारी दिएका छन् ।
रचनाको टल्सास्थित सेन्ट फ्रान्सिस अस्पतालमा उपचार भइरहेको उनका श्रीमान् कपिलले जानकारी दिएका छन् । उनको उपचारका लागि कपिलले सहयोगको अपिलसमेत गरेका छन् । अहिलेसम्म उनलाई हजार बढिले सहयोग गरिसकेका छन् । रचनालाई सहयोग गर्न चाहनेले उनको स्टाटसको स्क्रीन सटै तस्वीर हेर्नु होला ।
रचना आफ्ना श्रीमान् र साढे दुई वर्षको छोरासहित ११ महिना अघि अमेरिका छिरेकी हुन् । उनीहरु ओक्लोहमाको अटोकामा बस्छन् ।
गायिका लक्ष्मी गौतमको मौलिक तीज गीत ‘बरिलै बल्लपो चाल पाईयो’ सार्वजनिक
गुल्मी बम्घामा झुण्डिएका सञ्चारकर्मी कृष्णश्री शर्माको मृत्युको कारक–‘केटी काण्ड’ !
२०७६ आश्विन ७, मंगलवार १९:०५
श्रीमानको मृत्यु पछि बिचल्ली परेको परिवारलाई अमेरिकाबाट अमर क्षेत्रीको सहयोग !
-सचिन्द्र श्रेष्ठ फेरि एक पटक नेपाली सांगीतिक बजार तातीएको छ, न तातियोस पनि किन जहाँ जहिले जुन बेला पनि जे…